NetBit စျေး - အွန်လိုင်း NBIT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို NetBit (NBIT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ NetBit (NBIT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ NetBit ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
NBIT – NetBit
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ NetBit တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
NetBit များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NetBitNBIT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000924NetBitNBIT သို့ ယူရိုEUR€0.000785NetBitNBIT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000709NetBitNBIT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000845NetBitNBIT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00838NetBitNBIT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00585NetBitNBIT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0207NetBitNBIT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00346NetBitNBIT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00124NetBitNBIT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00129NetBitNBIT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0208NetBitNBIT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00716NetBitNBIT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00501NetBitNBIT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0693NetBitNBIT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.155NetBitNBIT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00127NetBitNBIT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0014NetBitNBIT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0288NetBitNBIT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00644NetBitNBIT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.098NetBitNBIT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.1NetBitNBIT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.35NetBitNBIT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0682NetBitNBIT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0256
NetBitNBIT သို့ BitcoinBTC0.00000008 NetBitNBIT သို့ EthereumETH0.000003 NetBitNBIT သို့ LitecoinLTC0.00002 NetBitNBIT သို့ DigitalCashDASH0.00001 NetBitNBIT သို့ MoneroXMR0.00001 NetBitNBIT သို့ NxtNXT0.0666 NetBitNBIT သို့ Ethereum ClassicETC0.000136 NetBitNBIT သို့ DogecoinDOGE0.277 NetBitNBIT သို့ ZCashZEC0.00001 NetBitNBIT သို့ BitsharesBTS0.0361 NetBitNBIT သို့ DigiByteDGB0.0344 NetBitNBIT သို့ RippleXRP0.00325 NetBitNBIT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00003 NetBitNBIT သို့ PeerCoinPPC0.00312 NetBitNBIT သို့ CraigsCoinCRAIG0.422 NetBitNBIT သို့ BitstakeXBS0.0395 NetBitNBIT သို့ PayCoinXPY0.0162 NetBitNBIT သို့ ProsperCoinPRC0.116 NetBitNBIT သို့ YbCoinYBC0.0000005 NetBitNBIT သို့ DarkKushDANK0.297 NetBitNBIT သို့ GiveCoinGIVE2 NetBitNBIT သို့ KoboCoinKOBO0.22 NetBitNBIT သို့ DarkTokenDT0.000851 NetBitNBIT သို့ CETUS CoinCETI2.67
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 17:35:02 +0000.